Karaiba: Ho Fanohanana Ny Renintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2012 6:39 GMT
Anton-dresaka mafana nataon'ireo mpitoraka bilaogy rezionaly ny Fetin'ny Reny, izay nankalazaina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo manerana an'i Karaiba, – na koa hoe, ireo reny. Avy amin'ny lahatsoratra fankasitrahana ary koa avy amin'ny kaonty amin'ny fomba hanoheran'ireo vehivavy ny fanenjehana, mifangaro voraka ihany izy ity, fa tokony ho faly daholo ireo reny rehetra na aiza na aiza …
Hanamarihana ny fotoana ary dia nalahatr'i TALLAWAH ireo reny Jamaikana malaza ahazoany valinteny amin'izao andro fametrahana itony fanontaniana malaza itony: ny fananan-janaka ve no tena zavatra tsara indrindra nataonao teo amin'ny fiainanao?” Saika azo vakiana ihany ny valinteny.
Nandray ny reniny ho “ohatra velona izay nanao sorona ny tenany” ny mpiray tanindrazana Nadine, Unscripted :
Naneho ny fihetsehampony i Guyanese-born Tastes Like Home :
Ao amin'ny My big, fat, Cuban family, niditra an-tsehatra ihany koa ny mpitoraka bilaogin'ny ankizy ary nizara ireo zavatra manan-danja nampianarin'ny reniny azy nandritra ny taona maro – hatramin'ny “[niainana] tantara tsara ” ka hatramin'ny “tsy fananana tahotra.” Ny mpitoraka bilaogy Kiobana no tena nandrenesana feo mikasika ny fahafoizan-tenan'ny reny – sy ny vehivavy rehetra – izay mbola handalo amin'izany. Naneho lahatsoratra mikasika ny “fitondran'ny reny Kiobana” i Havana Times “…
…fa fomba fijery mifandanja amin'izany ao amina lahatsoratra hafa no manazava ny antony mahatonga ny maha-reny hankasitrahana:
Fa maninona ary ny Kiobana no tsy manan-janaka maro? Nanolotra fomba fijery iray ity lahatsoratra ity . Nandefa lahatsarina foko iray i Pedazos de la Isla ho an'ny vehivavy Kiobana, manazava hoe:
Nanao lahatsoratra ny Notes from the Cuban Exile Quarter tamin'ny volana Martsa ho voninahitry ny fahatsiarovana an'i Laura Pollan:
Na dia teo aza ny fandrahonana, ny fanenjehana, ary na dia maro aza ireo vehivavy no nogadrain'ny mpitandro ny filaminana, Vehivavy 68 miakanjo Fotsy no nanaraka ny diabe namakivaky ny Fifth Avenue any andrefan'i Havana. Sady nandeha izy ireo no nihira ‘Viva Laura Pollán!’ ary koa ‘Fahafahana ho an'ny gadra politika !’
Tsara ihany ny koa ny mampatsiahy fa any am-ponja no andanian'ny Reny Kiobana ny androny noho ny fiarovany ny zon'olombelona ho an'ny vahoaka Kiobana.
Etsy andanin'izany, manome ny heviny i Haiti Chery, amin'ny renin'i Trayvon Martin milaza hoe:
Nanamarika ny vanim-potoana ihany koa ny mpitoraka bilaogy ampielezana Trinidadiana, na dia hafa aza ny fomba nanehoany izany. Nanome soso-kevitra vitsivitsy mikasika ny fanomezana amin'ny Fetin'ny Reny ny mpitoraka bilaogy mpanao lamaody Afrobella (dindona: mialà lavitra ny vy!) ary mirary andro mahafinaritra an“ireo izay rehetra azo atao hoe reny” :
Nilaza ny mpitoraka bilaogy an-tsary iray chookooloonks etsy andanin'izany hoe:
Ny hajian-tsary ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity “Reny, rahavavy”,dia Sakafo ho an'Izao tontolo izao, nampiasaina miaraka amin'ny alalana Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Creative Commons license. Tsidiho Sary flickr ahitana ny sakafo hoan'izao tontolo izao.